Ciidamada Galmudug oo Bur buriyay Baco Biyaha ay ku gaydiyaan dadka reer Miiga ah.
Ciidamo ka tirsan dowlad Goboleedka Galmudug ayaa burburiyay baco barkado loo ekaysiiyey oo xiisad ka abuurey miyiga u dhaxeeya degaannada Baxdogaabo iyo laasbuur ee gobolka Galgaduud.
Xildhibaano, wasiiro hore, guddoomiyaal xigeennada gobolka Mudug, maamulka Degmada Cadaado iyo saraakiil ciidan oo halkaasi tegay ayaa ka qeyb qaatay burburinta Bacaha Barkadaha loo ekeysiiyay.
Waxaa ay sheegeen mas’uuliyiintaas in marnaba aysan ogolaan doonin dadka dadka ku nool degaanada Gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug colaad laga dhex abuuro, waxaana ay ugu baaqeen Ciidamada Ammaanka inay tallaabo ka qaadaan.
Degaannada Baxdogaabo iyo laasbuur ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagneyd xiisad dagaal oo u dhaxeysa laba Beelood, kuwaas oo isku heystay Bacaha loo ekeeysiiyay Barkadaha.
« Golaha Wasiirada Puntland oo Meel mariyay Miisaaniyada 2021.
Hogaamiyaha Gobolka Tigray ee Ethiopia oo War ka soo saaray Duqeyntii Xalay »